रक्सी धेरै आउन थालेपछि विमानस्थलमा कडाई : विदेशबाट कुन सामान ल्याउन सजिलो ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
रक्सी धेरै आउन थालेपछि विमानस्थलमा कडाई : विदेशबाट कुन सामान ल्याउन सजिलो ?
पुस २६, २०७५ बिहिबार ११:२१:३७ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाडौं – विदेशबाट फर्किंनेले अबदेखि ‘निजी गुण्टा, झिटी भारी’ निर्देशिकामा तोकिएको भन्दा बढी सामान ल्याएमा जफत गर्न थालिएको छ । विदेशबाट फर्कनेले धेरै रक्सी बोकेर आउन थालेपछि भन्सार जाँचमा कडाई गर्दै निर्देशिका भन्दा बढी सामान ल्याएमा जफत गर्न थालिएको हो ।
बढीमा एक लिटर रक्सी मात्र ल्याउन पाउने नियम भए पनि योभन्दा धेरै ल्याउन थालेपछि कडाई गरिएको विमानस्थल भन्सार प्रमुख चुँडाराज सापकोटाले उज्यालो अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो ।
‛पछिल्ला केही दिनदेखि विदेशबाट फर्कनेले रक्सी धेरै ल्याउन थालेको देखियो, त्यसैले हामीले कडाई गर्न थालेका हौं′ सापकोटाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‛निजी गुण्टा झिटी भारी निर्देशिकामा उल्लेख भएको परिणामभन्दा धेरै सामान ल्याएमा जफत हुन्छ ।′
२०७३ साल साउन १ गतेदेखि जारी भएको ‘निजी गुण्टा, झिटी भारी’ निर्देशिकामा उल्लेख भएको परिणामभन्दा धेरै सामान ल्याएको पाइएमा जफत हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कुन सामानमा भन्सार तिर्न पर्दैन ?
‘निजी गुण्टा, झिटी भारी’ निर्देशिका अनुसार विदेशबाट फर्किंदा लुगाफाटा, बरबिछ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना सामान, औषधी उपचार गराई फर्केका बिरामीका औषधी, शारीरिक रूपमा अशक्त यात्रुले सहाराको रुपमा प्रयोग गरेका सामानमा सजिलैसँग ल्याउन पाइन्छ । यी सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तिमा एक वर्ष काम गरेर फर्किंएका नेपालीले ३२ इन्चसम्मको टिभी ल्याउन पाउँछन् । तर अरु नै कामले विदेश गएर एक वर्ष नबिताई फर्किएको भएमा भन्सार छुट् पाईंदैन । यसरी टिभी ल्याएमा विमानस्थलमा भन्सार तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
विदेशबाट घर फर्किंदा आफन्तलाई मोबाइल ल्याइदिने चलन पनि छ । तर निर्देशिका अनुसार एक थान मोबाइल ल्याउँदा मात्र भन्सार छुट पाइन्छ ।
पेशागत सामानमा पनि भन्सार तिर्न पर्दैन । तर त्यसो भन्दैमा जति पनि ल्याउन पाइन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन । बिभिन्न पेशा गर्ने व्यक्ति स्वदेश फर्किंदा ल्याएका आफ्नो पेशासँग सम्वन्धित सामानमा पनि भन्सार लाग्दैन ।
विदेशबाट फर्किंदा एउटाभन्दा बढी टिभी ल्याउन पार्ईंंदैन । ३२ इन्चभन्दा ठूलो टिभी ल्याएमा इन्चअनुसार भन्सार महशुल तिर्नुपर्छ । कतिपय सामानमा एकैपटक ४० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याएको सामान अन्य व्यक्तिको नाममा जम्मा गर्न वा नामसारी गरी छुटाउन पाइने छैन ।
विदेशबाट फर्किने नेपालीले ल्याउन मिल्ने सामानको बारेमा निर्देशिकामा भएको व्यवस्था हेर्नुहोस् :
Jan. 11, 2019, 8:15 a.m.
अनि यो जफत गरियको सामान चाहिँ कर्मचारीक घरमा जान्छ हो ला होइन 😂 घर जादा रक्सीले फितान हुने भय अब देखि हाकिम हरु ।।
यो सरकारले खालि हामी परिश्रम गरेर खाने अनि घर फर्किंदा परिवार अनि आफन्तजनको थोरै खुशी बटुल्न खोज्ने विवश अनि लाचार जनतालाई मात्र किन आफ्नु शक्ति लाद्छ ? जो २ नम्वरी धन्दावाट अरबौंको समान ल्याउँछ , उनीहरुलाई किन समाउनसक्दैन ? अनि समाए पनि किन कारवाही गर्न सक्दैन ? जस्तै ३३ किलो सुनको काण्ड / जसले देश लुटिरहेका छन् , अनि उसैसंग कमिशन लिएर देश लुट्ने कर्मचारीलाई खोइ त कारवाही ? देश लुट्नेसंग कमिशन खाएर हामी निमुखाको कमाइ लुटेर आफ्ना सन्ततिको भरणपोषण गर्न लाज लाग्दैन सरकार ? हामी निमुखामाथि शक्ति प्रदर्शन गर्नुभन्दा पहिला त्यस्तालाई कारवाही गरेर देखाउन म सरकारलाई चुनौती दिन्छु /